माघ ७ गते, काठमाडौं । विभाजित नेकपाका दुवै समुह अहिले कांग्रेस फकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । दुवै समुहले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्तावहरु समेत राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले मुख्यतः प्रदेशहरुमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेको विषय सार्वजनिक भईरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री कै प्रस्ताव राखेको विषयले चर्चा पाएको छ । मंगलबार मात्रै प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफुँहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
‘म शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छु,’ प्रचण्डले प्राइम टाइम्स नामक एक टेलिभिजनसँगको अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘संविधान र प्रणाली बचाउने शर्तमा उहाँ या अरु कसैलाई उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि मान्न कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’
यसअघि गत माघ १ को साँझ पनि विभाजित नेकपाका दुई अध्यक्षहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल देउवालाई भेट्न देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । जहाँ प्रचण्डले देउवासँग आन्दोलनदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए ।
कुनको पक्षको प्रस्ताव ओझनदार ?
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीकै अफर गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने दुई प्रदेशमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद दिने अफर गरेको छ । तर, यसबीच संसद पुर्नस्थापना नै हुन्छ या हुँदैन भन्ने टुंगो छैन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा नै पो विघटन गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि विद्यमान छ ।
अन्यौंल नै अन्यौंलका बीच कांग्रेस पनि स्पष्ट नभएको देखिन्छ । संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले अदालतको निर्णयलाई पर्खनु बाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेकपा विभाजित नै भएको छैन् र दुवै पक्षसँग भर गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।
‘प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भनेर विज्ञापन नै गर्नुभयो, तर उहाँले हामीलाई चुनाव गराउँदा गराउँदै बीचैमा छोडेर जानुभएको थियोे, उहाँको छोरीलाई त्यत्रो मेहनेत गरेर हामीले जिताएका थियौं’ श्रेष्ठले संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘उहाँहरु पुर्नस्थापना भएर मिल्नुभयो भने त हामी हेरेका हेर्यै हुन्छौं, दुनियाँमा के सम्भव छ ? के सम्भव छैन् ?’
उनका अनुसार कांग्रेसले ओली पक्षका कुनै पनि प्रस्तावलाई हाल विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन् । ‘ओली पक्षलाई त कसरी विश्वास गर्ने ? लोकतन्त्र नै मास्न उद्धत छन्, संविधानमा नै नभएको संसद विघटन गरिदिए’, उनले भने ।
उनका अनुसार दुई पक्षबीच कुनै एकको प्रस्ताव ओझनदार भनेर आफुँहरुले भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘विश्वास गर्ने अवस्था छैन्, कसरी कुन पक्षको ओझनदार भन्ने ?’, उनको प्रश्न छ ।
कांग्रेसकाे लाइन कता ?
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा अप्रत्यासित रुपमा संसद विघटन गरेका थिए । उनले संसद विघटनसँगै आगामी वैशाखमा निर्वाचनको पनि घोषणा गरेका छन् ।
ओलीले गरेको संसद विघटनप्रति प्रचण्ड–नेपाल पक्ष मात्रै नभई कांग्रेस पनि आन्दोलित छ । तर, कांग्रेसभित्रको संस्थापक खेमा अर्थात् सभापति देउवाले भने सरकारबाट घाेषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वागत गरिरहेको छ । जसको कारण नेपाली कांग्रेसको आगामी लाईन नै के हो भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन् ।
तर, नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने कांग्रेस आगामी लाईनबारे स्पष्ट भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेस सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छ । ‘हामी दुवैको ललिपपमा फस्नेवाला छैनौं’, नेता श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यहि अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं, अदालतको फैसलालाई त पर्खनुपर्यो नि !’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्व भने कांग्रेस निरन्तर आन्दोलनमै रहेको उनको भनाई छ । ‘कांग्रेसले लोकतन्त्रको विषयमा कसैसँग सम्झौता गर्दैन्, संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम पनि लोकतन्त्र विरोधी छ, हामी निरन्तर संघर्षमै छौं त कसरी अस्पष्ट ?’, उनले भने ।